भरतपुरमा रेनु र बिजयबिचको प्रतिस्पर्धा के हुँदैछ ? यस्तो छ पछिल्लो अवस्था – OSNepal
भरतपुरमा रेनु र बिजयबिचको प्रतिस्पर्धा के हुँदैछ ? यस्तो छ पछिल्लो अवस्था
Osnepal May 18, 2022 0
चितवन, ४ जेठ :
भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेनु दाहालले मतान्तर फराकिलो बनाउँदै लगेकी छन् । ३१ हजार ६९३ मतगणना हुँदा उनले २ हजार १९८ मतको अग्रता लिएकी छन् ।
रेनुले ११ हजार ७१६ मत पाउँदा एमालेका विजय सुवेदीले नौहजार ५१८ मत प्राप्त गरेका छन् ।
स्वतन्त्र उमेदवार जगन्नाथ पौडेलले ५ हजार १४७ मत पाएका छन् । भरतपुर महागरपालिकामा अहिले ७ र ८ नम्बर वडाको मतगणना भइरहेको छ ।
त्यस्तै हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको उम्मेदवारहरुको अग्रता कायमै रहेको छ । हालसम्म ४३ हजार ३ सय ७० मत गणना हुँदा उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी एकीकृत समाजवादीकी उम्मेदवार मीना कुमारी लामाले अग्रता बनाइरहेकी छिन् ।
त्यसैगरी उपमेयर पदमा पनि गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका राजेश बानियाँले ठूलो मतान्तरले अग्रता लिएका छन् । लामाले १३ हजार ३ सय ५८ मत प्राप्त गर्दै अग्रता बनाएकी छिन् ।